Horyaalka Serie A oo sanadkiiba lagu iibsadey lacag ka badan hal bilyan oo euro! – Gool FM
Horyaalka Serie A oo sanadkiiba lagu iibsadey lacag ka badan hal bilyan oo euro!
Raage February 5, 2018
(Roma) 05 Feb 2018 – Xuquuqda baahinta horyaalka Serie A 3-da fasal-ciyaareed ee min 2018-21 ayaa laga iibiyay sharikad wax tebisa oo Spanish ah oo la yiraahdo Mediapro taasoo fasal-ciyaareedkiiba ku qaadatay €1,050,001,000 (hal bilyan, 50 milyan iyo kun euro).
Iibinta horyaalka Talyaaniga ayaa dib loogu dhigay ilaa bishan Febraayo kaddib markii ay hillinada reer Talyaani ee Sky iyo Mediaset ay ku guuldarraysteen inay bixiyaan dalabka Serie A oo ahaa €1.05bn xagaagii tegey.
Taas baa Mediapro u saamaxdey inay tartanka soo gasho iyadoo bixisay lacag €1,000 euro ka badan dalabkii Lega Serie A oo ahaa €1.05bn (hal bilyan iyo konton milyan oo euro).
Sharikaddan oo uu fadhigeedu yahay Barcelona ayaa haatan heshiiska la saxiixan maamulka Lega Serie A, iyadoo sharikaddan Mediapro oo la aasaasay 1994-kii ay maamusho hillinnada ciyaaraha baahiya ee BeIN Sports qaybta Spain.
XOG; Ivan Strinic oo xagaaga AC Milan ku biiraya
Conte oo Milkiilaha Chelsea u diray Fariin ah: "Haddad doonto iga ceyri kooxda.".